Dhibaatada Mac ee leh M1 oo leh shaashadda supermetric-ka ayaa xal heli doonta. | Waxaan ka socdaa mac
Dhibaatada Mac ee leh M1 oo leh shaashadda supermetric-ka ayaa xal heli doonta.
Manuel Alonso | | Kombiyuutarada Mac
Markuu qalab cusub suuqa yimaado ama barnaamij softiweer ah iyo xitaa adeeg, waa macquul in dhibaatooyinka qaarkood ay soo baxaan. Mac-yada leh Apple Silicon iyo M1 sidoo kale waxay la ildaran yihiin cilladoyinkan. Waa run in xal marwalba la heli karo. Dabcan Apple horey ayey u heshay jawaabta arrinta waafaqsanaanta la aqoonsan yahay ee M1 oo leh qaar ka mid ah super-mitir ama muuqaal aad u ballaaran.
In a dokumenti cusub Waxaa soo saaray adeegga farsamada ee Apple, waxay ka hadlaysaa jiritaanka dhibaatooyinkaas iyadoo lagu saleynayo dhibaatooyinka ka dhashay iswaafajinta qaar ka mid ah shaashadaha super-metric ama ultra-wide. Tan macnaheedu waa laba shay. Dhinac in Shirkaddu waxay qiraysaa jiritaanka dhibaatada, dhinaca kale, waxay ku xallin doontaa cusbooneysiinta mustaqbalka ee macOS.
Haddii xallinta la taageeray aan laga heli karin bannaanka sare ama muuqaalka super ultrametric ee ku xiran Mac-gaaga oo leh Apple's M1 chip. Haddii aad ku xirto qalab aad u ballaaran ama super-ultra-khafiif ah si aad Mac leh Apple M1 chip. Xaaladahaas oo kale, qaraarada qaarkood oo ay taageerayaan muuqaalka ayaa laga yaabaa lama heli karo.
In kasta oo aynaan ogeyn goorta ay Apple soo deyn doonto cusbooneysiinta macOS ee ay ku jirto xalka dhibaatada, laakiin wax walbaa waxay taas muujinayaan waqti dheer qaadan maayo Hadda, si loo arko qaraarro dheeri ah shaashadda dibedda, waa inaan gujinnaa calaamadda Apple ee ku taal geeska bidix ee kore ee Mac. Waxaan fureynaa Nidaamka Xulashooyinka, riix Bandhigyada oo hoos u dhig furaha Xulashada inta aan gujineyno «Miisaanka . »
Sidan ayaan ku hagaajin karnaa xallinta sawirka cabirka shaashaddayada. Xal ku meel gaar ah ilaa midka saxda ahi ku yimaado qaab software dhammaystiran.
Hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato mowduuca oo lagu wargaliyo wararkii ugu dambeeyay, waad raaci kartaa dunta in qaar ka mid ah akhristayaasha 'MacRumors' ay ku fureen gogosha daabacaddan casriga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Dhibaatada Mac ee leh M1 oo leh shaashadda supermetric-ka ayaa xal heli doonta.